Solitaire: ny fanangonana voafaritra dia havaozina amin'ny maody vaovao 4 ary maro hafa | Androidsis
Solitaires - Ultimate Collection nohavaozina miaraka amin'ny maody lalao 4 vaovao sy maro hafa
Solitaires: ny Ultimate Collection dia lalao solitaire vaovao ho an'ny Android izay nohavaozina androany miaraka amina andianà vaovao mihoatra ny mahaliana. Miresaka momba izany isika ireo maodely lalao 4 vaovao sy andianà fanamby maromaro hanentanana antsika isan'andro ao amin'ity solitaire voasokitra tsara ho an'ny finday ity.
La ny version 1.4 no havaozina androany hitondra ireo andian-dahatsoratra vaovao ireo ho an'ny lalao izay atolotray amin'ireto andalana ireto ary izany dia tonga lafatra rehefa te-hilalao lalao hialana voly amin'ity lalao karatra tsy hay hadinoina ity izahay.
1 Inona ny Solitaires: ny fanangonana azo antoka
2 Inona no Vaovao ao amin'ny Solitaire 1.4: The Definitive Collection
Inona ny Solitaires: ny fanangonana azo antoka
Miatrika solitaire izahay izay raha mampiavaka azy ny zavatra iray dia amin'ny alàlan'ny fomba lalao isan-karazany sy mametraka azy amin'ny toerana tena miavaka raha ampitahantsika amin'ny hafa. Ary izany dia amin'ny ankapobeny ananantsika andiana maody 28 na karazana solitaire misy karazany 10 lalao: Solitaire (Klondike), Spider Solitaire, FreeCell, Pyramid, Tripeaks, Scorpion, efamira valo, Yukon, Golf, mpangalatra 40 ary Memory.
Noho izany hanana fahafinaretana sy fialamboly tsy ankijanona ianao raha mila zavatra mahafinaritra kokoa an'ny mahazatra irery. Ary izany rehetra izany dia avy amin'ny fampiharana iray ihany nefa tsy mila misintona na inona na inona.
ireo nohazavaina ny maody azy ireo:
manirery: ny afovoan'ity lalao ity ary izany no mahazatra eo amin'ny kilasika misy kilalao an-tsokosoko na miaraka amina scoring style klasik na Vegas ihany
Spider Solitaire- Misafidiana lalao akanjo 1 mora, lalao akanjo 2 anelanelany, na lalao 4-fitoriana sarotra.
Karatra fotsy: Ireo vao manomboka dia afaka manomboka amin'ny maody mora, izay misy karatra voalahatra, raha ny mpilalao mandroso kosa dia hankafy ny lalao kilasika miaraka amin'ny lalao isa isa fantatra sy ny statistikan'ny tena manokana
tripeaks- Ny Tripeaks sy ny Tripeaks miafina dia fitsaboana amin'ny lalao haingana foana
Yukon: Sarotra sy sarotra: Yukon mitokana, Rosiana ary Alaska.
Mpangalatra efa-polo: mandalo ny tokana indray mandeha monja
Pirámide: manana tahan'ny fandresena 0,5% fotsiny izy ka io no iray amin'ireo solitaire sarotra indrindra alefa
Golf: manana karazany roa isika ho an'ny mahazatra sy mora
mpivady: tsy maintsy mizatra mamorona karatra tsiroaroa ianao ary mampihena ny isan'ny hetsika
Scorpion Solitaire- Ny maody lalao vaovao navoaka tamin'ny kinova 1.4 ary hybrid an'ny Spider sy Yukon izay afindra ny karatra toy ny ao amin'ny Yukon, fa ny takelaka dia apetraka ao amin'ny Spider
Efamira valo: Andramo amin'ny lalao miolana ny lalao FreeCell tany am-boalohany: efamira valo fa tsy efatra
Ny tsara indrindra dia izao nadika tamin'ny Espaniôla ary na dia ao amin'ilay fanavaozana vaovao aza dia toerana maro no nampiana. Tianay koa izany offline dia afaka milalao ivelan'ny Internet ianao, manana firaketana manokana, ary mpanara-maso statistika.
Inona no Vaovao ao amin'ny Solitaire 1.4: The Definitive Collection
Ankoatra ireo maodely lalao 4 vaovao, amin'ny andiany 1.4 an'ny Solitaire, rafitra vaovao misy laharana, zava-bita vaovao ary fanamby vaovao no natambatra mba hamitana isan'andro. Ireo fanamby ireo Manomboka amin'ny iray isan'andro isan'andro ka hatramin'ny 3 izy ireo, amin'izay ianao hanana fialamboly bebe kokoa ary fitsapana hamita.
Tokony hataontsika manana maody vaovao antsoina hoe Scorpion Solitaire, ary izay noresahinay tahaka ny teo aloha, ho toy ny hybrid eo anelanelan'ny Spider sy Yukon, toy ny ahitantsika ireo karazana Scorpion sy FreeCell antsoina hoe Eight Off ary Easy Eight Off.
ny fiteny eo an-toerana vaovao Ireto dia: Holandey, Slovak, Poloney, Serba ary Kroaty. Lalao maimaim-poana mamela antsika hanaisotra ny dokam-barotra amin'ny alàlan'ny fandoavam-bola tokana azontsika atao amin'ny alàlan'ny fampiharana iray ihany rehefa nanomboka azy izahay.
Raha fintinina, ary toa an'i Alex Presman, lehiben'ny mpamorona ny Moongose ​​Net, dia nanoro hevitra hoe: Solitaire Bliss Collection te-ho tonga solitaire tsara indrindra amin'ny Android hahatratra mpilalao an-tapitrisany mitady hanana fotoana mahafinaritra amin'ny lalao toa ilay vao nohavaozin'izy ireo hanomezana aina bebe kokoa sy fialamboly isan'andro.
Raha mitady lalao amin'ity karazana ity ianao dia afaka mamaky ny rohy mankany Andramo Solitaire: The Ultimate Collection miaraka amina karazana maodely marobe ary traikefa tsara mihoatra ny tonga lafatra ho an'ny mpanaraka an'ity lalao karatra angano ity.
Fampahalalana misimisy kokoa ao Manirery
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Solitaires - Ultimate Collection nohavaozina miaraka amin'ny maody lalao 4 vaovao sy maro hafa
Fanadihadiana Xiaomi POCO M3: mendrika izany ve izy amin'ny famaritana azy?
Ny tetika tsara indrindra an'ny Parchis STAR